Nzvimbo dzeZvaunodana Kuti Uite | Martech Zone
Muvhuro, September 30, 2013 Muvhuro, September 30, 2013 Douglas Karr
Isu tinogara tichiedza Kudana kuti tiite pane edu masaiti uye vatengi vedu. Ichi chingave chekutanga post, asi kune nzvimbo dzinoverengeka dzekupa nzira yekubatana pane yakajairwa webhusaiti. Ini ndaikurudzira makambani kuronga nzvimbo idzi mumusoro wadzo manejimendi manejimendi kuti zviite nyore kumabhizinesi kuwedzera, kugadzirisa, uye kuyedza akasiyana mafoni -kuita. CTA nzvimbo dzewebsite yako:
Saiti yakafara - kuva nenzvimbo inowirirana kubva peji kuenda kune peji uko mushandisi anogona kutarisira kuona kufona kuchiito kwakakosha. Izvi zvinogona kuve panhanho pane peji, inotsvedza pasi / kumusoro pani (zvakanyanya senge yedu yekunyorera pani), kana popover div. Buda Piano mune Flash uye iwe uchaona pani pamusoro petsoka kupfuura saiti ku Nyoresa Nhasi.
Zvakare - vanhu vanoongorora mapeji muF pateni kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. CAR barbar remberi inzira yakanaka yekutora chiono chevanhu sezvavanoverenga mukati pamwe nezviri mukati peji. Bhonasi inonongedza kana iwe uchikwanisa kuchengeta iyo yekufona kune chiito inoenderana neicho chaicho zvirimo zvacho. Isu tinoisa maCTA padivi redu repadivi uye anobuditswa zvine simba zvichienderana nechikamu chakatumirwa posvo.
MuRukova - zvinonyanya kukanganisa, asi kuisa runhare kune chiito mukati mezvako zvemukati, kungave nekubatanidza, bhatani kana CTA, inogona kuona kuti yaonekwa. Mazhinji zvemukati manejimendi manejimendi anotendera iwe kusefa zvirimo, kuti iwe ugone kuwedzera kufona kuti chiitwe mashoma ndima mateki mukati kana pamberi / mushure mekoko peji rako.
Ive neshuwa yekuverenga zvimwe pamusoro kunzwisisa iyo F-Layout paWebdesigntuts +:
Isu takaona zvinoshamisa mhedzisiro pane yedu yekutsvedza-pasi ekunyorera pani pane Martech Zone. It Inoita zvinopfuura mazana mana muzana zvirinani pane yedu-yekuyerera kunyorera kunyorera kuchiito pazasi pezvatinotumira. Ndine chokwadi chekuti pane shanduko dzatinogona kuyedza kuvandudza mhedzisiro, asi data rekutanga rinopa data rekuti patinonyanya kukanganisa isu, zvirinani mhedzisiro. Isu tinowanzo tendera mukupokana neichi chiito sezvo isu tisingade kurasikirwa chaiko nevateereri vedu nekuti tiri kurova shambadziro kwese kwese… asi zvakakodzera kutaura nezvazvo.
Tags: kudana kuzviitodaidza kunzvimbo yekuitactakutevera kwezisof marongerwomukuyerera kudana kuzviitoinline adssitewide kushevedza zviito
Gumiguru 10, 2013 na8: 29 PM
Ipulagi ipi yawakashandisa kuwana iyo barini yepamusoro kumusoro chaiko kweblog?
Gumiguru 15, 2013 pa 9:33 AM